Wararka Maanta: Arbaco, May 1 , 2013-Ammaanka Magaalada Muqdisho oo si aad ah loo Adkeeyay; Iyadoo baqdin laga qabo in Al-shabaab ay Weerarro geysato
Guddoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ahna ku simaha guddomiyaha gobolka, Cali Axmed Guure ayaa sheegay in qorshahooda uu yahay sidii lagu badbaadin lahaa nolosha shacabka Soomaaliyeed, isagoo xusay inay heleen fariimo ku saabsan in Al-shabaab ay qorsheynayso inay qaraxyo geysato.
“Dowladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir waxay go’aansadeen inay sameeyaan howlgallo lagu adkeynayo ammaanka Muqdisho si looga hortago falalka guracan ee ay qorsheynayaan kooxaha nabadda diiddan, shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay gacan ku siiyaan ciidamada sidii ammaanka lagu sugi lahaa,” ayuu yiri Cali Axmed Guure.
addooyinka waaweyn ee Muqdisho sida isgoyska KM-4 iyo jidka Maka Al-Mukarama oo ah kuwa ugu mashquulka iyo ciriiriga badan ayaan maanta shaqeynyn, waxaana ku sugan ciidammo ka tirsan kuwa dowladda oo u diidaya gaadiidku inay maraan.
“Maalintii lahaad ayaan maanta socod ku maraynaa jidadka waaweyn ee Muqdisho, meel walba waxaa taagan ciidammo aad u feejigan, inkastoo ay dadku meel ku dhow marayaan haddana ma ogola in gaadiidku ay jidadka maraan,” ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada dukaamada ku leh waddada Maka Al-mukarama.
Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa la joojiyay xaflado badan oo ka dhici lahaa Muqdisho, kuwaasoo lagu xusayay maalinta shaqaalaha, sababo la xiriira xirnaanshaha magaalada, balse waxaa jira in goobo kale oo Muqdisho ka tirsan lagu qabanayo xaflado maalintan lagu xusayo.
“Ciidamadu rasaas ayay ridayaan meelaha qaarkood, kuwaasoo digniin ay uga dhigayaan gaadiidka doonaya inay waddooyinkaas maraan, arrintan waa mid ku cusub Muqdisho oo aanan horay u arag,” ayay tiri haweeney ka mid ah dadkii saakay ku lugeynayay waddooyinka xiran.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soconayaan qorshayaasha lagu sugayo ammaanka guud ee caasimadda, iyagoo sheegay in Al-shabaab ay qorsheynayso inay weerarro argagaxiso ka geysato Muqdisho.